सुर्खेतका बाढीपीडित पाँच वर्षपछि पुनर्वास हुँदै | नेपाली पब्लिक सुर्खेतका बाढीपीडित पाँच वर्षपछि पुनर्वास हुँदै | नेपाली पब्लिक
सुर्खेतका बाढीपीडित पाँच वर्षपछि पुनर्वास हुँदै
घर निर्माणका लागि रू. ३१ करोड, बालीनालीमा क्षति पुगेकालाई रू. २ करोड
आकाश तारा बयक २०७५, २७ चैत्र बुधबार २०:०६
सुर्खेत – सुर्खेतका बाढीपीडितले पाँच वर्षपछि घर निर्माणका लागि सहयोग रकम पाउने भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लाका बाढीपीडितको घर निर्माणका लागि ३१ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागेको छ।
२०७१ सालमा आएको बाढीबाट सुर्खेतमा १ हजार ४५ जना घरवारविहीन भएका थिए। प्रदेश सरकारले बाढी पहिरोपीडितलाई चार वर्षपछि पुनर्वास गर्न लागेको हो। सरकारले प्रतिपरिवार ३ लाखका दरले ३१ करोड ३५ लाख रकम उपलब्ध गराउन लागिएको छ। अब केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने राहत रकमसमेत बाढीपीडितकै सहयोगमा खर्च गरिने प्रदेश सरकारले बताएको छ।
चार वर्षसम्म त्रिपालमै कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका बाढीपीडितलाई आगामी असारसम्म पुनर्वास गराउन लागिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन्। उनका अनुसार बाढीपीडितलाई उपलब्ध गराइने सहयोग रकम प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा दिइनेछ। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिशमार्फत विस्थापितहरूले तीन किस्तामा उक्त रकम पाउनेछन्।
‘सरकारले दिने रकमको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले घर निर्माणको चरणका आधारमा सहयोग रकम उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै जग्गा नहुने परिवारलाई सरकारले कुनै निश्चित क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले छरपस्ट रहेका बस्तीलाई एकीकृत बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको एकीकृत बस्ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले यसअघि नै कार्यविधि बनाइसकेको छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘कर्णालीका विकट क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्ती, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेका र घरवार नभएका व्यक्तिलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।’ गत मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा पारित कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय आयोजना समन्वय समिति बनाइएको थियो ।
गैरकृषि वा व्यावसायिक कृषिमा रोजगारी सृजना हुन सक्ने अवस्था हेरी नयाँ बस्ती विकास योजना बनाइनेछ । नयाँ बस्तीमा आवास निर्माणको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिइनेछ । यसरी बनेको आवास १५ वर्षसम्म विक्रीवितरण गर्न, धितो–बन्धक राख्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाइनेछैन । यस्तो आवास बनाउँदा लाभग्राहीले कम्तीमा ५ प्रतिशतबराबरको श्रमदान, नगद वा सामग्री योगदान गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री केसीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर छनोट गरिएको जग्गामा एकीकृत बस्ती बसाइने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार जिल्लामा एकीकृत बस्ती कम्तीमा चारवटासम्म बनाइनेछ। पश्चिम सुर्खेतमा दुईवटा, वीरेन्द्रनगरमा एउटा र भेरीगंगामा एउटा एकीकृत बस्ती बसाइनेछ। चारवटा ठाउँमा बस्ती अटाउन नसकेमा भने एकीकृत बस्ती थप गरिनेछ। तर, आफ्नो जग्गा भएकाहरूलाई भने सरकारले एकीकृत बस्तीमा समावेश गर्ने छैन।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले केही महिनाअघि बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले संकलन गरेको लगत तथ्यांकका आधारमा बाढीपीडितलाई पुनस्र्थापना गर्न लागिएको हो। सुर्खेतबाहेकका अन्य ठाउँका बाढीपीडितलाई समेत सरकारले राहत उपलब्ध गराउनेछ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढीबाट घरबारविहीन भएकालाई समेत सरकारले राहत दिनेछ। राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारसँग तथ्यांक माग गरिएको छ। जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्धार समिति र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा पीडितले राहत पाउनेछन्। जग्गा भएका परिवारलाई आवास निर्माणका लागि रकम उपलव्ध गराउने र नभएकाहरूलाई सरकारले जग्गा खोजेर एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। सुर्खेतसहित अन्य जिल्लाका करिब २ सय बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई पनि पुनर्वास गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
केही दिनअघिको असिनापानीबाट बालीनालीमा क्षति पुगेका किसानले समेत राहत पाउनेछन्। मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय बुधवार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री केसीले असिनापानीबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिने जानकारी दिइन्।
उनले केही दिनअघि दैलेख, रुकुम–पश्चिम र जाजरकोटलगायतका जिल्लामा हावाहुरी र असिनाबाट क्षति पुगेका नागरिकलाई राहत दिन २ करोड रकम छुट्याइएको जानकारी दिइन्। सरकारले उक्त रकम कार्यविधि बनाएर कृषकहरूलाई राहत दिने प्रवक्ता केसीको भनाइ छ। त्यस्तै, सुर्खेतमा निर्माणाधीन अत्याधुनिक गोदाम घरको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्र मातहत रहेको उक्त गोदाम अब प्रदेश मातहतमा आएपछि समयमै भवनको बाँकी काम सक्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले बताइन्।
लगत संकलन समिति
लाप्राकबासीलाई एकीकृत बस्ती निल्नु न…